स्वास्थ्य Archives - Page 179 of 180 - Purbeli News
क्यान्सरका विरामीलाई कहिल्यै नभन्नुस् यी ७ कुरा
क्यान्सर उपचारार्थ विरामीको अगाडि यदि कसैले क्यान्सर शब्दको प्रयोग गरिदियो भने यसले विरामीको मानसिकतामा नकारात्मक असर गरिदिन्छ । उसले असहज अनुभुती गर्न सक्छ र जसले गर्दा उपचारमा थप चुनौती पर्न जान्छ । यो कुरा थाहा पाइसकेपछि पक्कै पनि विरामीको परिवार तथा आफन्तलाई पनि गाह्रो हुन सक्छ कि क्यान्सरको विरामीको अगाडी कसरी प्रस्तुत हुने? कसरी सहज वातावरण ...
माय प्रेम गर्दाहुने वैज्ञानिक फाइदाहरु, मायाले गर्छ यस्ता बिभिन्न रोगको उपचार
माया प्रेम जिवनको एउटा अभिन्न पाटो हो । मानिस चाहेर वा नचाहेरै पनी मनिस् मायाजालमा पर्ने गर्दछ। मया एउटा अलौकीक अभास हो जस्ले आफैँमा अनौठो अनुभूति गराँउछ । माया र बिस्वसमा नै सन्सार अडेको हुन्छ यदी कुनै प्राणिमा माया वा भरोसा नहुंदो हो त? हामी यस्तो सन्सारको परीकल्पना सम्म गर्न सक्दैनौ । आज हामी माया प्रेमले स्वास्थ्य संग कस्तो सम्बन्ध राख्छ यसका क...
के तपाईलाई राती धेरै पिसाब लाग्छ ?
सामान्यतयाः निरोगी र वयस्क व्यक्तिले चौबीस घण्टामा कूल पिसाबको २० प्रतिशत मात्र सुतेको बेला उत्पादन गर्छ । तर वृद्धावस्थामा भने चौबीस घण्टाको पिसाबको ३३ प्रतिशत सुतेको समयमा उत्पादन हुन्छ । यो सामान्य मात्राभन्दा बढी पिसाव उत्पादन हुनुलाई रात्रि मूत्रश्राव रोग भनिन्छ । सुतेर उठेको पहिलो पिसाबलाई पनि रात्रिकालीन पिसाब मान्नुपर्छ । हाम्रो देशमा रा...
यि हुन स्वमुत्र सेवनका अचुक १० फाइदा
संसारमा रहेका मानिस अाफुलार्इ कुनै राेग नलागाेस या लागिहालेमा त्यसलार्इ निर्मुल बनाउन हजाराै अाैषधीहरू उपयाेग गरिरहेका हुन्छन । प्रत्येक राेगसंग लडन सक्ने क्षामता भएकाे अाैषधीहरूपनि मानवजिवनमा प्रसस्तै रहेका छन जुन उपयाेगी र प्रयाेग भइरहेकाे छ । सबै अाैषधीहरूकाे गुणले मानव जिवनमा फरक फरक प्रभाव पार्दछ । तर कतिपय अाैषधीहरू मान शरिमै निर्मीत भएका छन...
टाउको दुखिरहन्छ ! यसाे गर्नुहाेस्
१) कागतीको बोक्रालाई घोटेर वाक्लो चन्दन जस्तो वनाएर रातो रक्त चन्दन पनि घोटेरै दुवै लेप वरावरी मिलाई निधार र कन्चट तिर वाक्लो लेप गर्नाले टाउको दुख्ने रोग निको हुन्छ । २) तातो चियाको दुध नहालीकन एक दाना कागतीको रस मिसाएर तात्तातै पिएमा तुरुन्तै शीर पिडा नष्ट हुन्छ । ३) तुलसाको पात, अदुवा र ल्वाङलाई चन्दन जस्तो बनाई वाक्लो लेप बनाएर निधार र कन्चटम...
जोसिएर यौनसम्पर्क गर्दा स्मरण शक्ति गुम्ने खतरा
न्यूयोर्क । अमेरिकामा गरिएको स्वास्थसम्बन्धी एक अध्ययन अनुसन्धानले प्रत्येक १ लाख व्यक्तिमध्ये ७ जनामा स्मरण शक्ति गुम्ने रोगको शिकार हुने गरेको जनाएको छ । अचानक केही समयका लागि सबै कुरा बिर्सने यो घटना चिसो पानीमा पस्दा, टाउकोमा चोट लाग्दा र एकदमै जोसिएर यौन सम्पर्क राख्दा हुन सक्ने बताइएको छ । कहिलेकाहीं त्यस्तो अवस्थामा घन्टौंसम्म पनि स्मरण श...
चुइङगम चपाउने अनि पड्काउने अधिकांश किशोर किशोरीहरु हुन्छन् । चुइगमको प्रयोग गरे दाँत सफा हुन्छ भन्ने भ्रम पनि छ कतिमा तर यसको हानिकारक पक्षबारे भने कोही सचेत भएको पाईंदैन । प्राचिन ग्रीकमा पनि मानिसहरु दाँत सफा गर्न र श्वास स्वच्छ राख्न रुखको चोप चपाउँथे । आनन्दका लागि रुखको चोप चुइङगमको रुपमा चपाउने गर्थें । अचेल चुइङडम विश्वव्यापी रुपमा प्...
आर्थिक अभावले ४ वर्षे मृर्गौला पीडित बालकको उपचारमा समस्या
उदयपुर, १८ माघ / मिर्गौला र टिबी रोगीबाट पीडित उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ बुद्ध चौकका ४ वर्षिय बालक किसन विकको पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उपचारमा समस्या भएको छ । बुवाको टिबी लागेर निधन भएको र घरको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुँदा किसनको उपचारमा समस्या आएको हो । आर्थिक अवस्था दयनीय भएकी लिलाले मृगौला रोगी छोरा बचाई दिन सदरमुकाम गाई...
उर्लाबारी, १८ माघ । मोरङको उर्लाबारीमा रहेको मङ्गलबारे अस्पतालमा रेबिज रोगविरुद्ध लगाइने सुईको अभाव भएको छ । सुई अभाव भएपछि अस्पतालमा आउने बिरामी निजी क्लिनिकबाट महँगो शुल्क तिरेर सुई लगाउन बाध्य छन् । महँगो शुल्क तिरेर सुई लगाउनुपर्दा बिरामी मर्कामा छन् । निःशुल्करुपमा पाइने सुई निजी क्लिनिकबाट रु ६०० तिर्नुपर्दा बिरामी मर्कामा परेका छन् । सरक...
महिलाले यस्ता पुरुषसंग सेक्स रुची राख्छन्
एजेन्सी । महिला र पुरुषवीच हुने सेक्स सम्वन्ध वारे अनेकौं अनुसन्धान भएका छन् र ती अनुसन्धानले धेरै निष्कर्ष निकालेका पनि छ । यस्तैमा हालै गरिएको एक सर्भेक्षणले महिलाहरू यस्ता पुरुषसंग सेक्स सम्वन्ध राख्न चाहन्छन् जसको शरीरमा ठूलाठूला ट्याटु कुँदिएका हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ट्याटुवाला पुरुषसंग महिलाहरू बढी आकर्षित हुने गरेको पाइएको ह...